VONO OLONA TELO MIANAKA TAO TOAMASINA : Voasambotra tany Antanambao-Manampotsy i Tsilavina
Iray volana latsaka kely aty aoriana, dia nahazoana vaovao ilay raharaha vono olona tamin’ny fomba feno habibiana niseho tao Analankininina Hopitaly Be Toamasina ny alin’ny alatsinainy 18 marsa hifoha ny talata 19 marsa. 12 avril 2019
Raha tsiahivina, dia olona telo no namoy ny ainy tamin’izany, dia i Honorette vehivavy 29 taona sy ny zanany lahy antsoina hoe Kenzo 4 taona ary ny zaza mbola tao am-bohoka. Mialohan’ny namoizan’ilay renim-pianakaviana ny ainy, dia mbola nahavita nitantara ny nanjo azy izy. Fantatra nandritra izany fa ilay tovolahy antsoina hoe Tsilavina 22 taona izay mpiasa « aide-chauffeur » tao amin’izy ireo teo aloha ihany no nahavanona ny loza.
Nametraka fitoriana teo anivon’ny zandary misahana ny heloka bevava ny fianakaviana no sady nametraka teny amin’ny polisy misahana ny fikarohana heloka bevava Toamasina. Ny angom-baovao no nahalalana fa efa tafavoaka ivelan’i Toamasina i Tsilavina ary nanohy fitsoahana fa tsy nitolo-batana mihitsy.
Avy ao amin’ny Kaominina Niarovana-Caroline distrikan’i Brickaville no tena tanàna fiaviany. Nifanome tanana tamin’ny mpitandro filaminana tamin’ny fikarohana azy ny olona izay mahalala azy.
Natao ny fiambenana tao Niarovana-Caroline saingy tsy nipoitra tamin’ny tany fiaviany mihitsy ilay tovolahy. Araka ny angom-baovao marim-pototra voarainay, dia voasambotra tany ambanivohitra tany amin’ny distrikan’i Antanambao-Manampotsy, ny alahady 7 avrily lasa teo i Tsilavina. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa nandefa ekipa nanampy ny polisy tao Vatomandry nanao ny fisamborana ny teo anivon’ny polisy misahana ny heloka bevava taty Toamasina. Efa voatazona ao Toamasina izy amin’izao fotoana izao. Re ihany koa fa mbola misy olona hafa karohina amin’izao raharaha izao.